Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) Q7aad | Warsugan News
Home Maqaalo Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) Q7aad
Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) Q7aad
Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir)
(1956kii – 1987kii)
“Warka shalayto nagu soo dhaceen, aad u dhego-beellay,
Dhinbiilaha sidoodu wadnaha, nooga dhaawacaye,
Nin dhegaystay Caliyow ma tumo, Dhaanto iyo heese,
Xaqiisii nin lala dheelmadoo, dhuuntay baw darane,
Dhibaatada ka diidaa ma helo, dhaxal adowgiise,
Denbi-dhaaf shahiid lagu dhintuu, kuugu dhow yahaye,”
Maansada Dhoobada Hawaas ee Timacadde ee 1961kii,
Mujaahid Bashiir waxa lagu wareejiyay si uu u carbiyo Mujaahid Indho-case oo ‘Kamaandowsta’ ahaa. Waxa kale oo ku lammaanaa Mujaahid Raage-bidaar. Dardaarankii Mujaahid Indho-case la siiyay wuxu ahaa in uu rasaasta u badiyo oo uu inta uu doono u qaado RBJ-7-ka mooyaan e’. Laba maalmood markii ay u baxeen dab-ridka, ayaa waxa Mujaahid Muuse Biixi loo keenay natiijadii.
Muuse Biixi oo natiijadii dab-ridkaa ka soo baxday ka hadlayay, wuxu yidhi:
•	Baastooladdana waa 90%,
•	Qoriga AK-gana 100%,
Intaa ka dib, Mujaahid Indho-case waxa la faray in uu hubiyo in Mujaahid Bashiir orod wax ku ridi karo oo wax ku toogan karo. Meel ayaa loo dhigay wax uu toogto isaga oo ordaya, waxaanu qiimayntii keenay wax wanaagsan. Waxa ka sii fiicnaan lahayd in lagu tababaro yool ordaya, laakiin markaa lama hayn.
Aniga oo qaybo badan oo xogtan ah marti uga ahaa Mujaahid Muuse Biixi Cabdi, bal aan idiin soo daayo isaga oo ka hadlaya Mujaahid Bashiir iyo sahammadii gudaha, waxaanu yidhi:
“….Horto, ninkaasi ninka sidaas dagaalka ugu xariifka ah ayuu ahaa, waxaana aan u soo diray dhowr hawl-gal (Mission) oo hore isaga, Raage-bidaar iyo Fooxle. Markii ugu horreeyey sahan gudaha ah ayay soo dhammeeyeen. Waxay soo sugeen yoolalkii aanu doonaynay, waa ay soo noqdeen. Yoolkii hore ee ay ka soo noqdeen waa uu naga dhicisoobay. Mar labaad ayay soo noqdeen. Gaar ahaan, waxaa soo noqday isaga, Raage-bidaar iyo Ismaaciil Cabdi Taanigan nool, ka-dibna waxay soo taabteen badda Bullo-xaar. Waxay ka soo lugeeyeen Durya. Soo-noqodkii labaad waxay soo sahamiyeen meelo aanu hub dhiganno. Hubkii waxay ku aaseen meelo u dhow buurahan ka hooseeya Agabbar. Markii ay laba door geeyeen waxa u qorshaysnaa in halkaa hub badan la dhigo, buuraleydaa la fadhiisto oo dariiqqaa Jabuuti la kala gooyo. Nin basaas ahaa, si uu u ogaaday mooyaan e’ oo reeraha meesha deggan ahaa ayaa qoday xabaalihii ka-dibna la baxay hubkii, waxaanu u sheegay ciidammadii Siyaad Barre. Bashiir, Raage-bidaar , Ismaaciil Cabdi Taani, Fooxle iyo Cali-sandheere, waxay go’aan ku gaadheen in ay helaan ninkii hubka la baxay. Inta ay Durya ka soo lugeeyeen ayay raadkiisii gureen, waanay ku guulaysteen in ay helaan.
Tababarkaas, markii uu Mujaahid Bashiir dhammeeyey ilaa saddex, afar jeer oo kale ayaan Hargeysa u soo diray oo sahan iyo yool sugan ah. Saddex ayaa naga khasaaray, kii ugu horreeyey ilaa kii uu ku dhintay.”
Sida aan ka weriyay looga-qaateenkii ka qayb-galay, hawl-galkan waxa laga fuliyay magaalada Abaarso 17kii Oktoobar, 1986kii. Waa maalin amran. Waa mid ka mid ah maalmaha xuska iyo xusuustaba ka mudan Mujaahidiinta iyo dhammaan geyiga Somalilandba. Waa maalin ku beegnayd sannad-guuradii 2aad ee Xuska maalinta shuhadada oo ka soo bilaabantay 1984kii. Inta badan hawl-gallada SNM iskama ay dhici jirin, bal se dabka ayaa loogu xiddigin jiray si loo muuneeyo loona maamuuso maalmahaa dhawrsan ee halgameed.
Lix Mujaahid oo muddo laba habeen ah socod lug ah kaga soo maqnaa magaalada Dibiile oo ay ka soo ambo-baxeen, ayaa goor ay saacaddu ku beegnayd qiyaastii ila 6.30kii subaxnimo kula kulmay magaalada Abaarso saddex baabuur oo ay wateen nin caddaan ah iyo lix ilaa toddoba Soomaali ahi. Lixda Mujaahid waxay kala ahaayeen:
1.	Axmed Ibraahin (Raage-bidaar),
2.	Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir),
3.	Nuur Muhindis,
4.	Mooge Xasan Samaawiye,
5.	Maxamed Odowaa,
6.	Maxamed Cali Guuleed (Ina Indho-case),
Magacyadan Mujaahidiinta waxaan ka martiyay oo ii yeedhiyay Nuur Muhindis. Mujaahidiintu saddexdii Baabuurba halkii ayay ku furteen kuwaas oo kala ahaa laba Land-cruiser iyo Xaajiyad ‘singeer’ lahayd. Hal Land-cruiser oo caddaa Guddoomiyaha SNM ayaa lagu maamuusay, labadii kalena ciidanka ayaa adeegsan jiray. Wax khasaare ah oo Mujaahidiinta soo gaadhay ma jirin.
Baabuurkan Guddoomiyaha oo uu dirawal ka ahaa Mujaahid Cabdi Xiis, ciidammada cadowgu 29kii Diisambar 1990kii, mar ay soo weerareen xaruntii SNM ee Balli-gubadle ayay dib u kaxaysteen.
Waxa kale oo isaguna jiray baabuur land-rover ahaa oo ay boolisku lahaayeen oo oo uu wadan jiray sarkaal la odhan jiray Bay-lambar oo ay SNM af-duubtay oo lagala noqday oo ay haddana mar kale soo kaxaysatay. Nin Mujaahid Ismaaciil la odhan jiray ayaa isagana waday.
Hawl-galkii Colka wadhaf ma lagu deyay:
Magaca Hawl-galka waxaan ka soo xigtay Cismaan Awr-liqe. Waa mid ka mid ahaa hawl-galladii ugu dhiirranaa uguna mudnaa ee ay SNM ka fuliso magaalada Hargeysa dhexdeeda goor cawayskii ku beegnayd, 19/12/1986kii. Dhowr jeer ayaa sahanka la kala qaaday oo la hubiyay. Markii si sax iyo maan ah loo sugay sahankii ayaa la soo diray saddex Mujaahid oo kala ahaa: Mujaahid Bashiir, Mujaahid Cismaan Awr-liqe iyo Mujaahid Nuur Muhindis.
Mujaahidiin badan oo kale ayaa hawl-galkaas ka qayb-qaadatay oo qofba kaalin kaga jiray, waxaana Mujaahidiintaas ka mid ahaa Maxamed Oomaar oo habeenkaa hawl-galka baabuurka sida waday aadna ay isugu xidhnaayeen iyo Mujaahid Qureysh oo ka mid ahaa dadkii Bashiir magaalada ku hayay
Maxamed Oomaar ayaa iiga sheekeeyay dhacdooyin xanuun iyo xaradhaamoba oo soo maray Mujaahid Bashiir intii uu hawl-galkan Hargeysa u joogay ee ay ku mashquulsanaayeen hawlihii sahanka. Laba dhacdo aan tusaale u soo qaato:
Maxamed Oomaar ayaa ma-hadhadan marinaya, waxaanu yidhi: “Waa intii aanu hawl-galku fulin oo cid walba loo baahnaa. Xog iyo waanu u baahnayn. Adduun iyo taakuleyn ayaanu u baahnayn. Siyaabo badan oo kalena in naloo caayo ayaanu u baahnayn. Ayaan-darrda na haystay se waxay ahayd in dadka intiisa badani iska kaayo ilaalinayso oo ay baqanayee. Galab ayay niman dhallinyaro ahaa oo aanu arrin iyo adduunba ka sugaynay nagula ballameen Makhaayadda Ina Garow. Halkii ayaanu sii fadhiisannay oo shaah iska dalbannay. Heeso ayaa ka socday rikoodh Makhaayadda ka shidnaa. Si ay wax u dhaceenba nimankii ballantii waa ay nagaga baxeen. Shaahii ayaanu iska cabbaynay annaga oo heesihii iska dhegaysanaynay.
Previous PostMadaxweynaha oo Ciidamada, Qoyskii iyo Shacbiga Somalilandba ka tacsiyadeeyey Geerida Taliyihii Ciidanka Birmadka ee Berbera Next PostHambalyo Meher Wacan Khadar Cabdi Cawaale Iyo Hamda Aadam Cismaan